Dota2ကို Offline Server ထောင်ပြီး အဖွဲ့လိုက် ဘယ်လိုကစားမလဲ?? - Myanmar End User
Dota2ကို Offline Server ထောင်ပြီး အဖွဲ့လိုက် ဘယ်လိုကစားမလဲ??
By Myanmar End User November 23, 2017 3471 views
ဒီ Tutorial ဆောင်းပါးကို Dota2ဂိမ်းမာတွေ မျှော်လင့်တကြီး စောင့်စားနေကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်ဗျာ…
Dota2Offline mode ကို အင်တာနက်လိုင်း လုံးဝပြတ်တောက်သွားတဲ့အခါ၊ လိုင်းအရမ်းလေးတဲ့အခါ၊ Offline ပြိုင်ပွဲတွေ လုပ်တဲ့အခါမှာ ကစားနိုင်ပါတယ်။ Offline ပြိုင်ပွဲတွေဆိုတာ သာမန်ပြိုင်ပွဲတွေကို ပြောတာပါ။ အင်တာနက်မသုံးတော့ Lag တာတွေ မရှိတော့ဘူးပေါ့။
ကဲ… ဒါဆို ဘယ်လိုကစားရမလဲ ဆက်ကြည့်ရအောင်ဗျာ…
ပထမဆုံး Steam အကောင့်ဝင်ပါ…
ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ Console ဖွင့်ရမှာပါ။ သာမန်အားဖြင့် Console အသုံးပြုဖို့ ပိတ်ထားပါတယ်။ Console ဟာ Command တွေပဲ ရိုက်လို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် နားလည်တဲ့ သူတွေအတွက် အသုံးပြုဖို့ ခွင့်ပြုထားတာပါ။ Console ကို သုံးမယ်ဆို ကိုယ်မသိတဲ့ Command တွေကို လျှောက်မရိုက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လျှောက်ရိုက်လို့ တခုခုဖြစ်ရင် ကိုယ့်အကောင့်ပဲ ဖြစ်မှာပါ။ 🙂
Steam login ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် Offline mode ကစားဖို့အတွက် Steam က Go Offline ကို နှိပ်ပါ။
ဒီ Tutorial ဆောငျးပါးကို Dota2ဂိမျးမာတှေ မြှောျလငျ့တကွီး စောငျ့စားနကွေမယျလို့ ထငျပါတယျဗြာ…
Dota2Offline mode ကို အငျတာနကျလိုငျး လုံးဝပွတျတောကျသှားတဲ့အခါ၊ လိုငျးအရမျးလေးတဲ့အခါ၊ Offline ပွိုငျပှဲတှေ လုပျတဲ့အခါမှာ ကစားနိုငျပါတယျ။ Offline ပွိုငျပှဲတှဆေိုတာ သာမနျပွိုငျပှဲတှကေို ပွောတာပါ။ အငျတာနကျမသုံးတော့ Lag တာတှေ မရှိတော့ဘူးပေါ့။
ကဲ… ဒါဆို ဘယျလိုကစားရမလဲ ဆကျကွညျ့ရအောငျဗြာ…
ပထမဆုံး Steam အကောငျ့ဝငျပါ…
ဒုတိယအနနေဲ့ကတော့ Console ဖှငျ့ရမှာပါ။ သာမနျအားဖွငျ့ Console အသုံးပွုဖို့ ပိတျထားပါတယျ။ Console ဟာ Command တှပေဲ ရိုကျလို့ရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နားလညျတဲ့ သူတှအေတှကျ အသုံးပွုဖို့ ခှငျ့ပွုထားတာပါ။ Console ကို သုံးမယျဆို ကိုယျမသိတဲ့ Command တှကေို လြှောကျမရိုကျဖို့ လိုအပျပါတယျ။ လြှောကျရိုကျလို့ တခုခုဖွဈရငျ ကိုယျ့အကောငျ့ပဲ ဖွဈမှာပါ။ 🙂
Steam login ဖွဈသှားပွီဆိုရငျ Offline mode ကစားဖို့အတှကျ Steam က Go Offline ကို နှိပျပါ။
(Z) Offline mode ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် Console ဖွင့်ဖို့အတွက် Dota2မှာ Right click ပေးပြီး Properties ကို ဖွင့်ပါ။
(U) Offline mode ဖွဈသှားပွီဆိုရငျ Console ဖှငျ့ဖို့အတှကျ Dota2မှာ Right click ပေးပွီး Properties ကို ဖှငျ့ပါ။
(Z) Properties ထဲကို ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ အောက်ပါ ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း Set Launch Options ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
(U) Properties ထဲကို ရောကျပွီဆိုရငျတော့ အောကျပါ ပုံမှာ ပွထားတဲ့အတိုငျး Set Launch Options ကို ကလဈနှိပျပါ။
(Z) Set Launch Options ကို နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင် Dota2ရဲ့ Launch option box တက်လာပါလိမ့်မယ်။ Box ထဲမှာ -console ကို ရိုက်ထည့်ပြီး OK ပေးလိုက်ပါ။ အောက်ပါပုံကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
(U) Set Launch Options ကို နှိပျလိုကျပွီဆိုရငျ Dota2ရဲ့ Launch option box တကျလာပါလိမျ့မယျ။ Box ထဲမှာ -console ကို ရိုကျထညျ့ပွီး OK ပေးလိုကျပါ။ အောကျပါပုံကို ကွညျ့နိုငျပါတယျ။
(Z) Console ကို Offline ကစားမယ့် စက်တိုင်းက ဖွင့်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Console ဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင် Dota2ကို ဖွင့်ပါ။ Dota2ရဲ့ Settings ထဲက To Advanced Hotkeys option မှာ Console အတွက် ပေးထားတဲ့ Shortcut key ကို ကြည့်ပါ။ Default ကတော့ “\_” ကို ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သေချာအောင် စစ်ကြည့်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်နှစ်သက်ရာ key ကို ပေးနိုင်ပါတယ်။
(U) Console ကို Offline ကစားမယျ့ စကျတိုငျးက ဖှငျ့ထားရမှာ ဖွဈပါတယျ။ Console ဖှငျ့ပွီးပွီဆိုရငျ Dota2ကို ဖှငျ့ပါ။ Dota2ရဲ့ Settings ထဲက To Advanced Hotkeys option မှာ Console အတှကျ ပေးထားတဲ့ Shortcut key ကို ကွညျ့ပါ။ Default ကတော့ “\_” ကို ပေးထားတာ ဖွဈပါတယျ။ သခြောအောငျ စဈကွညျ့ပါ။ ဒါမှမဟုတျ ကိုယျနှဈသကျရာ key ကို ပေးနိုငျပါတယျ။
(Z) ပြီးရင်တော့ Hotkey နှိပ်ပြီး Console ကို ခေါ်ပါ။
(U) ပွီးရငျတော့ Hotkey နှိပျပွီး Console ကို ခေါျပါ။
(Z) ကဲ… ဒါဆို Setting ကျတာ အားလုံးပြီးသွားပါပြီ။ ဆိုတော့ Server ထောင်မယ့် Client ချိတ်မယ့် အပိုင်းကို ရောက်လာပါပြီ။ ပထမဆုံး Server ထောင်မယ့် စက်ရဲ့ IP address ကို သိဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီအတွက် command prompt (cmd) ကို ခေါ်ပါ။ Start က Search box မှာ cmd လို့ ရိုက်ပြီး ရှာဖွင့်ပါ။ command prompt (cmd) မှာ ipconfig လို့ ရိုက်ပြီး IP address ကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
(U) ကဲ… ဒါဆို Setting ကတြာ အားလုံးပွီးသှားပါပွီ။ ဆိုတော့ Server ထောငျမယျ့ Client ခြိတျမယျ့ အပိုငျးကို ရောကျလာပါပွီ။ ပထမဆုံး Server ထောငျမယျ့ စကျရဲ့ IP address ကို သိဖို့လိုပါတယျ။ အဲဒီအတှကျ command prompt (cmd) ကို ခေါျပါ။ Start က Search box မှာ cmd လို့ ရိုကျပွီး ရှာဖှငျ့ပါ။ command prompt (cmd) မှာ ipconfig လို့ ရိုကျပွီး IP address ကို ကွညျ့နိုငျပါတယျ။
ပုံမှာ IPv4 Address: 192.168.0.34 ဆိုပြီး တွေ့မှာပါ။ ဒါဆို Server ရဲ့ IP က 192.168.0.34 လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ IP သိပြီဆို Server စပြီးတော့ ထောင်ပါမယ်။ Dota2console ကို သွားပါ။
Server ထောင်ဖို့အတွက် Console မှာ အောက်ပါ Command တွေကို ရိုက်ထည့်ပါ။
sv_lan 1 (Server လို့ သတ်မှတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်)
dota_force_gamemode # ( # နေရာမှာ နံပါတ် အစားထိုးထည့်ပေးရမှာပါ… နံပါတ်တွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုတော့ အောက်မှာ ကြည့်ပါ..)
All Pick = 1
Captains Mode = 2
Random Draft = 3
Single Draft = 4
Mid Only = 11
All Pick (Ranked) = 22
jointeam good/bad (good နဲ့ bad ကို တစ်ခုပဲ ရိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ good ဆိုတာ Radiant team မှာ နေဖို့ပါ။ bad ဆိုတာ Dire team မှာ နေဖို့ပါ။ Team ခွဲထဲအခါ သုံးပါတယ်။ တကယ်လို့ jointeam ကို မရိုက်ဘူးဆိုရင် Map ထဲရောက်သွားတဲ့အခါ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်)
map dota.bsp (ဒီ Command ကတော့ ဘယ် Map နဲ့ ကစားမလဲဆိုတာကို သတ်မှတ်ပေးရတာ ဖြစ်ပါတယ်)
map dota.bsp command ရိုက်ပြီးလို့ Loading တက်သွားပြီးရင် အခြား Player တွေကို စောင့်ရမှာပါ… အဲဒီအချိန်မှာ Time ကို ရပ်ထားဖို့လိုပါတယ်… မဟုတ်ရင် Gold တွေ ကုန်သွားနိုင်လို့ပါ… Time ကို ရပ်ထားဖို့က console မှာ dota_pause command နဲ့ ရပ်ထားရမှာပါ… အားလုံးပြီးလို့ Start loading ဖြစ်ပြီဆိုရင် console ကနေ dota_pause ကို ပြန်ရိုက်ပေးပါ… ဒါမှဆက်သွားမှာ မို့ပါ…
dota_start_ai_game 1 (Player မပြည့်လို့ Bot ထည့်ကစားမယ်ဆိုရင် ဒီ Command ကို သုံးပေးရမှာပါ)
dota_bot_set_difficulty # ( # နေရာမှာ 0,1,2,3,4 အစားထိုးပေးရမှာပါ… Bot ထည့်ကစားမယ်ဆိုရင် ဒီ Command ကို သုံးပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်… မထည့်ဘူးဆိုရင် မလိုပါဘူး… အဓိပ္ပါယ်ကတော့0= easy, 1 = medium,2= hard,3= unfair)
dota_bot_populate (၁၀ ယောက်ဆော့ဖို့ Player မပြည့်တဲ့အခါ လိုနေတဲ့ နေရာမှာ Bot ထည့်ဖို့ဆိုရင် ဒီ Command ကို သုံးပေးရမှာပါ)
Client အတွက် Command တွေကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ အောက်မှာ ကြည့်ပါ။
connect IP address (IP address နေရာမှာ Server ထောင်တဲ့ စက်ရဲ့ IP address ကို ရိုက်ထည့်ပေးရမှာပါ.. ဥပမာ – connect 192.168.0.34)
jointeam spec (ပွဲကြည့်သူအနေနဲ့ Observer လုပ်ချင်ရင်တော့ ဒီ Command ကို သုံးနိုင်ပါတယ်)
ပုံမှာ IPv4 Address: 192.168.0.34 ဆိုပွီး တှေ့မှာပါ။ ဒါဆို Server ရဲ့ IP က 192.168.0.34 လို့ သတျမှတျပါတယျ။ IP သိပွီဆို Server စပွီးတော့ ထောငျပါမယျ။ Dota2console ကို သှားပါ။
Server ထောငျဖို့အတှကျ Console မှာ အောကျပါ Command တှကေို ရိုကျထညျ့ပါ။
sv_lan 1 (Server လို့ သတျမှတျလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ)
dota_force_gamemode # ( # နရောမှာ နံပါတျ အစားထိုးထညျ့ပေးရမှာပါ… နံပါတျတှရေဲ့ အဓိပ်ပါယျကိုတော့ အောကျမှာ ကွညျ့ပါ..)
jointeam good/bad (good နဲ့ bad ကို တဈခုပဲ ရိုကျရမှာ ဖွဈပါတယျ။ good ဆိုတာ Radiant team မှာ နဖေို့ပါ။ bad ဆိုတာ Dire team မှာ နဖေို့ပါ။ Team ခှဲထဲအခါ သုံးပါတယျ။ တကယျလို့ jointeam ကို မရိုကျဘူးဆိုရငျ Map ထဲရောကျသှားတဲ့အခါ ရှေးခယြျနိုငျပါတယျ)
map dota.bsp (ဒီ Command ကတော့ ဘယျ Map နဲ့ ကစားမလဲဆိုတာကို သတျမှတျပေးရတာ ဖွဈပါတယျ)
map dota.bsp command ရိုကျပွီးလို့ Loading တကျသှားပွီးရငျ အခွား Player တှကေို စောငျ့ရမှာပါ… အဲဒီအခြိနျမှာ Time ကို ရပျထားဖို့လိုပါတယျ… မဟုတျရငျ Gold တှေ ကုနျသှားနိုငျလို့ပါ… Time ကို ရပျထားဖို့က console မှာ dota_pause command နဲ့ ရပျထားရမှာပါ… အားလုံးပွီးလို့ Start loading ဖွဈပွီဆိုရငျ console ကနေ dota_pause ကို ပွနျရိုကျပေးပါ… ဒါမှဆကျသှားမှာ မို့ပါ…
dota_start_ai_game 1 (Player မပွညျ့လို့ Bot ထညျ့ကစားမယျဆိုရငျ ဒီ Command ကို သုံးပေးရမှာပါ)
dota_bot_set_difficulty # ( # နရောမှာ 0,1,2,3,4 အစားထိုးပေးရမှာပါ… Bot ထညျ့ကစားမယျဆိုရငျ ဒီ Command ကို သုံးပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ… မထညျ့ဘူးဆိုရငျ မလိုပါဘူး… အဓိပ်ပါယျကတော့0= easy, 1 = medium,2= hard,3= unfair)
dota_bot_populate (၁၀ ယောကျဆော့ဖို့ Player မပွညျ့တဲ့အခါ လိုနတေဲ့ နရောမှာ Bot ထညျ့ဖို့ဆိုရငျ ဒီ Command ကို သုံးပေးရမှာပါ)
Client အတှကျ Command တှကေတော့ ရိုးရှငျးပါတယျ။ အောကျမှာ ကွညျ့ပါ။
connect IP address (IP address နရောမှာ Server ထောငျတဲ့ စကျရဲ့ IP address ကို ရိုကျထညျ့ပေးရမှာပါ.. ဥပမာ – connect 192.168.0.34)
jointeam spec (ပှဲကွညျ့သူအနနေဲ့ Observer လုပျခငြျရငျတော့ ဒီ Command ကို သုံးနိုငျပါတယျ)
By Myanmar End User January 2, 2017 0
By Myanmar End User December 8, 2016 0